Indlu entle eTunquén Ecologic - I-Airbnb
Indlu entle eTunquén Ecologic
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPaloma
Indlu entle eyenziwe ngamaplanga eTunquén Ecologic, ebekwe kumgama weemitha ezimbalwa ukusuka kulwandle oluhle noluzolileyo. Kwi-140m2 kunye ne-4 yokulala (ababini abaphindwe kabini) indlu ingamkela abantu abali-10 ngokukhululekileyo. Le ndlu ibekwe kumhlaba oyi-5000 m2 ozele zizityalo zendalo kunye neembono ezintle zolwandle.
Indlu yethu inesakhiwo esikhethekileyo, imilo yayo ifana neqokobhe elikhulu elinika igama elithi "La Caracola". Umhlaba unezityalo ezintle zemveli (ezinqabileyo kwizowuni), kunye nenkuni encinci yokufunda kunye nokuphumla.
4.71 · Izimvo eziyi-50
I-souroundings ithule kakhulu kwaye ikhululekile. Unoluvo lokuba kude ngenene esixekweni, nokuba ukude nje iiyure eziyi-1,5!!
Umbuki zindwendwe ngu- Paloma
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ngalo naluphi na ulwazi oluthe vetshe! Ndithetha iSpanish, isiNgesi kunye nesiFrentshi.